Taariikhda My Butros » 6 Noocyada Ragga Dumarka raadinayso
6 Noocyada Ragga Dumarka raadinayso
Last updated: Jan. 19 2021 | 3 min akhri
Waa maxay nooca haween yihiin rag raadinayso? Tani waa su'aal jawaabahooda badan. Guys Qaar ka raadi bambooyin galmo la hay'adaha kaamil ah iyo habdhaqanka Diva ah, halka kuwa kale qof dumar ah oo cayaar ah waa soo jiidasho. Guys qaarkood waxay u baahan qof dumar ah oo ku haynaya oo ka mid ah, sida hooyooyinka ay loo isticmaalaa in lagu. Sidoo kale waxaa jira kuwa kaas oo qayb ka ah qarsoodiga ama dareen dhexdhexaad ah madaxbanaanida waa mid soo jiidata. Haddii aan la iska isticmaashay dhamaan fursadaha, halkan joogaa waa lix nooc oo haween rag badan raadinayso:
Tani waa nooca ugu horeysay ee haweeney in ku soo dhaca maskaxdooda qof ee marka la isku dayayo in la ogaado taas oo noocyada haweenka u badan tahay inay soo jiitaan ragga maalmahan. Waa run: Qarax galmo ka dhigi doonaa 99% oo nin oo ay madaxa noqon markay hoos Socon waddada. Waa sharciga aad u of jiidashada! Si kastaba ha ahaatee, aad ku nasan karto waxyaqiinsan: ahayn dumarka oo kaliya rag raadinayso! Dhab ahaantii, raadinta xiriirka muddo dheer ah, guys qaar xitaa fogaado doonaa bambooyin galmada.
Naagtii ayaa u caruureed
Waxaad taas maqlay jeer aad u badan: ragga marna koraan gebi. Waxay la ciyaaro ay ku cayaarayaan iyo ciyaaraha video dhan noloshooda. Iyada oo ay tani tahay mid run ah oo ku saabsan nin kasta oo aad la kulanto, waa in aad ogtahay, waxaa jira kuwa soo jiita ruux ay dumarka caruureed, si ay fikradahooda ku niyadsan on nolosha, si ay dhoola cayaar ah in iftiimiya qolka. Weligaa mala yaabtay sababta guys ka weyn waxaa inta badan soo jiidatay haween badan oo yar yar? Tani waxay noqon kartaa sabab!
Waxaa la sheegay in haweenka raadinayso tiradaasi aabbahood, iyo rag nuqul hooyadood. Waa maxay sababta? Psychologists ayaa kuu sharxi doona dhammaan ku saabsan / noocooda ah lab dhedig dhan oo naga mid ah horumariyaan halka ay korayaan. Ka sokow taas, waxaa jira nin ka soo halkaas oo, aan misogynists isagoo, sida ay nolosha la dumar ah oo u xilsaaran daryeelka baahiyahooda aasaasiga ah wadaago, karinta iyo nadiifinta. Sidoo kale loo yaqaan "xaas", nooca hooyo-sida naag waa fiican rag badan ayaa.
Kumuunayaasha The qabow
La soco: rag yihiin had iyo jeer ma ka dib aad ugu dhedig iyo kooxda sexiest! Waxaa jira kuwa mahad bur wanaagsan oo fahamsan yahay kaftanka ay, qaybsada ay rabaan ama ay sida taageerayaasha ciyaaraha, iyo yaqaano sida loo maareeyo Console ciyaaraha ah. Ma meel naagta jikada? Ma aha daruuri! Wixii raggani, Haweeney ku haboon taageertaa kooxda kubadda cagta isla, oo kuwa ku dhibana wanaagsan ee ay video ciyaarta tartanka baabuurta jecel yahay. Si kastaba ha ahaatee, wax ka beddeli kara in qolka hurdada, halkaas oo aad leedahay waxaa laga yaabaa in ay hoos u falka qabow oo soo tricks ugu dhedig aad.
Naagtii ayaa u dahsoon
Dumarku waxay jecel inay is wareejiyeen by aura ah ee qarsoodiga, ugu yaraan bilowga aad u. Rag badan oo ku dhici waxa u, laakiin mar qarsoodiga ka dhammaatay, wax yaabo in uu noqdo caajis. Sidaas, taxaddar! Haddii nin ayaa lagu soo jiidatay kooxda dahsoon aad in meesha ugu horeysa, aad rabto in laga yaabo in ay sii qaarkood waxa dhamaan weheliyaan. Isticmaal xuquuqdaada ahaanshaha qof dumar ah, iyo isku dayaan in ay noqon aan la saadaalin karin, laakiin kaliya waqti ka waqti. A qarsoodiga wadarta daba dheeraaday ka dhigi kartaa nin qabaa aad wax qarinaya isaga ka, oo ninna ma uu jecel yahay in.
Naagtii ayaa u madax banaan
Ragga badanaa ma sida dumarka lagu xiray dhegganaan aan samayn karin inuu u dhaqaaqo hal ahaantood. Guys badan ayaa dareemi doontaa in ka badan soo jiidatay naagtii madax bannaan oo ka bedeli kartaa guluubka nafteeda haddii loo baahdo. Si kastaba ha ahaatee, Ka taxadir in aadan ka badin fal aad madaxbanaanida, sida lamaanahaaga dareemi karaa in aadan u baahan tahay isaga in aad noloshaada. Xitaa haddii aad kari kartid si ay u fuliyaan bac in culus on kuu gaar ah, waa inaad ka fiirsataa weydiisanaya inuu caawimo waqti ka waqti.
5 Tallaabooyinka lagu Caqabadaha gudbid Xiriirka Isgaarsiinta
3 Tips for Xiriirka la yaab leh